GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Toba) Bengali Biak Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexican Sign Language Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Serbia) Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
IHE IHE NDỊ CHINEKE KERE NA-AKỤZIRI ANYỊ
Chegodị gbasara ụmụ ejima yiri ibe ha. Ha bụ otu n’ime ndị ha na ibe ha na-emekọrịta ihe nke ọma. Ha na-adị n’ezigbo mma. E nwere otu nwaanyị aha ya bụ Nancy Segal. Ọ bụ ejima, bụrụkwa onyeisi Twin Studies Center. O kwuru, sị: “Ụmụ ejima na-ekwurịta okwu nke ọma, na-aghọtakwa ibe ha nke ọma.” Mgbe otu nwaanyị na-ekwu otú ya na ejima ya si emekọrịta, ọ sịrị: “Anyị ma nnọọ ihe niile gbasara ibe anyị.”
Gịnị mere ha ji aghọta onwe ha nke ọma? Nchọpụta e mere gosiri na ihe so akpata ya bụ otú e si zụlite ha na ebe a nọ zụlite ha. Ma, ihe kacha akpata ya si n’ọbara.
CHEGODỊ IHE A: O doro anya na Onye kere mmadụ otú a kacha mara onye ọ bụla n’ime anyị nke ọma. Devid kwuru, sị: “I kpuchiri m ekpuchi n’ime afọ nne m. E zonahụghị gị ọkpụkpụ m mgbe i mere m na nzuzo. . . . Anya gị hụrụ m ọbụna mgbe m bụ nwa e bu n’afọ, e dekwara akụkụ ahụ́ m niile n’akwụkwọ gị.” (Abụ Ọma 139:13, 15, 16) O nweghị onye ma anyị nke ọma otú Chineke si mara anyị. Ọ bụkwa naanị ya ghọtara ihe niile gbasara ahụ́ anyị nakwa otú ihe ndị merela ná ndụ anyị si mee ka anyị bụrụ ụdị ndị anyị bụ. Ebe ọ bụ na Chineke maara anyị nke ọma, obi kwesịrị isi anyị ike na ọ na-aghọta ihe niile gbasara anyị.
IHE BAỊBỤL NA-AKỤZIRI ANYỊ BANYERE OTÚ CHINEKE SI AGHỌTA ANYỊ
Devid gwara Jehova, sị: “Jehova, i nyochawo m, ị makwaara m. Ị ma mgbe m nọdụrụ ala na mgbe m biliri ọtọ. Ị na-anọ n’ebe dị anya tụlee ihe m na-eche. N’ihi na ọ dịghị okwu dị n’ire m, ma, Jehova, lee! ị marachaala ya.” (Abụ Ọma 139:1, 2, 4) Jehova makwa ihe ndị dị anyị n’obi, “ọ na-amatakwa ihe niile mmadụ na-eche n’echiche.” (1 Ihe E Mere 28:9; 1 Samuel 16:6, 7) Gịnị ka amaokwu Baịbụl ndị a na-agwa anyị banyere Chineke?
Ọ bụrụgodị na anyị agaghị akọwali ihe dị anyị n’obi ma ọ bụ ekwuchali otú ọ dị anyị n’obi ma anyị kpewe ekpere, Jehova na-ahụ ihe ọ bụla anyị mere iji kọwaa nsogbu anyị, ọ na-aghọtakwa ya. Ihe ọzọkwa bụ na ọ na-aghọta ihe ọma ndị anyị bu n’obi ime, ọ bụrụgodị na ihe ụfọdụ emee ka anyị ghara ime ha. Ebe ọ bụ na Chineke kere anyị otú anyị ga na-ahụ ndị ọzọ n’anya, ọ na-ahụ mgbe anyị chọrọ ime ihe ọma na ihe mere anyị ji chọọ ime ya.—1 Jọn 4:7-10.
Chineke na-ahụ ihe niile. Ọ na-ahụ ahụhụ niile anyị na-ata, ọ bụrụgodị na ndị ọzọ amaghị banyere ya ma ọ bụ na ha aghọtachaghị ihe anyị na ya na-alụ
“Anya Jehova na-elekwasị ndị ezi omume, ntị ya dịkwa n’arịrịọ ha na-arịọsi ike.”—1 PITA 3:12.
Chineke kwere nkwa, sị: “M ga-eme ka i nwee nghọta, zikwa gị ụzọ ị ga-eso. M ga-enye gị ndụmọdụ, anya m ga-adị n’ebe ị nọ.”—ABỤ ỌMA 32:8.
IHE GBASARA ANYỊ NA-EMETỤ CHINEKE N’OBI
Ịmara na Chineke na-aghọta otú ihe si dịrị anyị na ihe dị anyị n’obi ò nwere ike inyere anyị aka idi nsogbu anyị nwere? Chegodị ihe mere otu nwaanyị bi na Naịjirịa aha ya bụ Anna. O kwuru, sị: “Ọnọdụ ọjọọ m nọ na ya mere ka m chewe na ndụ m dị enweghịzi isi. Di m anwụọla, m nọkwa n’ụlọ ọgwụ na-elekọta nwa m nwaanyị na-erubeghị afọ iri na-arịa ọrịa mere ka isi ya buo ibu n’ihi mmiri juru ya n’ụbụrụ. A na-akpọ ọrịa a hydrocephalus. Ọ bụ mgbe ahụ ka a chọpụtakwara na m nwere ọrịa kansa. Ihe ọ pụtara bụ na a ga-awa m ahụ́, na-enyekwa m ọgwụ ndị siri ike. Ọ dịghịrị m mfe mụ na nwa m nwaanyị ịnọ n’ụlọ ọgwụ na-arịa ọrịa otu mgbe.”
Gịnị nyeere Anna aka idi nsogbu a? O kwuru, sị: “M chebaara amaokwu Baịbụl ụfọdụ echiche. Otu n’ime ha bụ Ndị Filipaị 4:6, 7. Ebe ahụ sịrị na ‘udo nke Chineke nke karịrị echiche niile ga-eche obi unu na ike iche echiche unu nche.’ Mgbe ọ bụla m chetara amaokwu Baịbụl a, ọ na-eme ka m mata na Jehova bụ ezigbo enyi m ebe ọ bụ na m ma na ọ na-aghọta ọnọdụ m karịa m. Ndị mụ na ha so na-efe Jehova nyekwaara m ezigbo aka.
“Ọ bụ eziokwu na mụ na ọrịa ahụ ka na-alụ, ma ọ kala mma. Nke nwa m nwaanyị adịkwuokwala mma. Anyị anaghịzi echegbu onwe anyị ma anyị nwee nsogbu ahụ n’ihi na anyị ma na Jehova nọnyeere anyị. Ihe Jems 5:11 kwuru na-eme ka obi sie anyị ike. Ọ sịrị: ‘Anyị na-akpọ ndị tachiri obi ndị obi ụtọ. Unu anụwo banyere ntachi obi Job, unu ahụwokwa ihe Jehova mesịrị mee, na Jehova nwere obi ọmịiko dị ukwuu, na-emekwa ebere.’” Jehova ghọtara ọnọdụ Job nke ọma, obi kwesịkwara isi anyị ike na ọ na-aghọta ọnọdụ ọ bụla anyị nọ na ya.
Baịbụl na-emesi anyị obi ike na Chineke ma na anyị nọ, ọ na-aghọta anyị, ọ na-emetekwara anyị ebere.
Gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na nsogbu gị na-adị gị ntakịrị ma i lechaa ọtụtụ nsogbu juru n’ụwa nke na obi anaghị ekwe gị rịọ Chineke ka o nyere gị aka?
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE Nke 3 n'Afọ 2018 | Ihe Banyere Gị Ọ̀ Na-emetụ Chineke n’Obi?
Nke 3 n'Afọ 2018 | Ihe Banyere Gị Ọ̀ Na-emetụ Chineke n’Obi?
ỤLỌ NCHE Nke 3 n'Afọ 2018 | Ihe Banyere Gị Ọ̀ Na-emetụ Chineke n’Obi?